Rogeeyyi murtoo darbe mormuudhaf argaman, Maleeziyaa, Sadaasa 8, 2021
Lammii Maaleeshiyaa kan baala sammuu joonjii deddebisuun siingaapoor keessatti himatamee dhukkuuba kooviid-19n waan qabameef jecha yeroo hanga hin murtaa’iniif murtiin du’aa irratti darbee rarraafamee akka turu manni murti iyyata dhaggeeffatuu ka biyyatti ajajee jira.
Manni murtii iyyatahimatamaa umriin 33 lammii Maaleeshiyaa dhaggeeffachuuf ture.Abukaattonni isaa akka jedhanti himatamaan kun dandeetti uummaan sammuun isaa qabu dadhabaa waan ta’eef jecha isa irratti adaba du’aa murteessuun faallaa seera Singaapoor jedhu.
Manni murtiin olaanaan kan siingaapoor garu iyyta har’a kana fudhatama kan dhabsisee yoo ta’u, manni murti inni gad aanuu iyyata kana akka ilaaluuf yeroo kennee jira.
Lammiin Maaleeshiyaa himatamee kun silaa Robii borii fannifamee ajjeefamuuf ture.Gareeleen mirga dhala namaaf falman abuukaatoo isaa wajjiin ta’uun nama dandeettiin sammuu isaa dadhabaa ta’e kana aangawoonni lubbuu isaa akka oolachan gaafataa jiru.
Waajirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa inni Jeeneevaa jiru wiixata kaleessaa ibsa baaseen, singaapoor ajjeesuuf karoora baaftee akka dhiiftuu, sababiin isaas hanqiina uumamaan qabuuf wal’ansa barbaachiisu hin arganne jedhee jira.
Kana amalees waggootii 11f adaba du’aa jala turuun isaa fayyaa sammuu isaa caalaatti midhamuuf kan gunmaache qaba yaaddoo jedhu qaba ibsii kun